उम्मेदवारका घर-घरमा बम, थपिँदै सुरक्षा चुनौती ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
उम्मेदवारका घर-घरमा बम, थपिँदै सुरक्षा चुनौती !
प्रकाशित मिति : बैशाख ३०, २०७४ शनिबार
नवलपरासीमा उम्मेदवारको घरघरमा बम भेटिन थालेपछि स्थानीय निर्वाचनका लागि सुरक्षा चुनौती थपिँदै गएको छ ।
यसैगरी बिहीबार नै गँैडाकोट नगरपालिकामा पनि नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का तर्फबाट नगरप्रमुख पदमा उम्मेदवार बन्नुभएका दुर्गादत्त ढुङ्गानाको घरनजिकै बिहीबार नै बम फेला परेको थियो । सो बमलाई पनि नेपाली सेनाको टोलीले डिस्पोज गरेको हो । कावासोती नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट नगरप्रमुखको उम्मेदवार बनेका दासीराम बस्यालको घरमा पनि फेला परेको बमलाई सेनाको टोलीले डिस्पोज गरेको थियो ।